We.com.mm - မဖြစ်နိုင်တဲ့ Relationship တစ်ခုအတွက်နဲ့ အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့
မဖြစ်နိုင်တဲ့ Relation Ship တစ်ခုအတွက်နဲ့ အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့
ဘယ်အရာ မဆိုပေါ့ ..ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံးကြိုးစား ပေးခဲ့တာ မှန်ရင် ဘယ်တော့မှ နောင်တ ရမနေပါနဲ့..
Rs တစ်ခုမှာလဲ အဲ့အတိုင်းပဲလေ…
ပြတ်ဆဲသွားတဲ့ Rs တစ်ခု ပြန်စဉ်းစားကြည့်..ကိုယ် သူ့အပေါ် အကောင်းဆုံး ချစ်ပေးခဲ့လားပေါ့…
တစ်ကယ်လို့..ကိုယ့်ဘက်ကမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရင်..သေချာတယ် မင်းသူ့ကိုမချစ်လို့...အဲ့တော့ မင်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး.. Why??(လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံး အရာတွေပဲ ဖန်တီးပေးချင်နေတာ သူ့အတွက် ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာမှန်သမျှပေါ့...)
တစ်ကယ်လို့ ..မင်းဘက်က လုပ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုရင် သေချာတယ် မင်းသူ့ကို ချစ်လို့..အဲ့တော့ မင်းခံစားရမယ် နာကျင်ရမယ်...But မင်းတွေးကြည့် မင်းဘက်က အကောင်းဆုံး ချစ်ပေး ကြင်နာပေးခဲ့တာတောင် မင်းကိုသူက ထားသွားတာ ..ရှင်းရှင်းလေး မင်းကိုသူမချစ်လို့…
အဲတော့ ပြန်တွေး တစိမ့်စိမ့်တွေး သေချာတွေးကြည့် တန်လား?? မင်းရဲ့ အချစ်နဲ့ အဲ့လိုလူနဲ့....မင်းခုတော့ နာကျင်နေမှာပေါ့.. လွမ်းနေမှာပေါ့..
But လွမ်းစရာတွေ နာစရာနဲ့ဖြေပစ်လိုက်..မုန်းပစ်လိုက်စမ်း စိတ်ကြိုက်.. တွေးပီးရင်တွေး ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းခဲ့တာတွေ ကြာရင် မင်းနာကျည်းသွားမယ်...တစ်ဖြည်းဖြည်း လျစ်လျူရှုတတ်သွားမယ်..ဥပေက္ခပြုတတ်သွားမယ်လေ..
အတ္တ နဲ့ မာန ဆိုတာမျိူးကို အဲ့လို နေရာမှာ ထုတ်သုံးစမ်းပါ ..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုချစ်လိုက် ..ပိုကောင်းအောင် နေလိုက်..ကိုယ်နဲ့ မတန်တဲ့သူလို့ သဘောထားလိုက်..ok မင်းကို တန်ဖိုးမထားတဲ့ လူနဲ့ မင်း လွဲသွားတာ တစ်ကယ်တော့ မင်း အတွက်ကံကောင်းသွားတာပါ.✌?
Selena နဲ့ပြတ်ပြီးနောက် Bella ဘက်လှည့်လာတဲ့ The Weeknd
အရပ်ရှည်တဲ့ အမျိုးသားတွေက ဇနီးသည်ကို ပိုမိုပျော်ရွှင်စေ